Rita, Writing for My Sake!: ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်း
Posted by Rita at 10/16/2009 11:52:00 PM
Ha ... Ha ... Great post!
အမရီတာရေ ဒီပို့စ်လေး အင်မတန် သဘောကျတယ်။
ဒီပို့စ်လေး ကြိုက်ပါ့ ညီမရေ..
အဲဒီ ပုံပြင် အရင်က မကြားဖူးဘူး။ ကျေးဇူး။
မမရီတာ သိနေတယ်နော် သိနေတယ်
ကိုယ်တော် ကတော့ မာတုဂါမ ကိုသည်ပြန်ပြီဆိုတာ
မာတုဂါမ ကိုသည်တဲ့ ကိုယ်တော်အတွက် သာဓု နှစ်ခါ ကျ ပါ ကိုယ်တော် ခိခိခိ
ပုံပြင်လေးနဲ့ နမူနာပြ ရှင်းပြသွားတာ တကယ့်ကို ဆီလျော်ပါပေတယ်။
I gotamessage that you want to give to blog reader.
The meaning of message that I got exactly same as you even I do not believe the ငရဲ, ဝဋ်ကြွေး, အတိတ်ဘဝ and ကံအကြောင်းတရား.
"ဓါးခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှို" ရင်တော့ ခံရတဲ့သူများက ပစ်ချလိုက်ရမယ့် ကြွေးအဟောင်းကို ပြုလုပ်သူများအနေနဲ့ ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်ပြောင်းတင်သလို ဖြစ်တော့မှာပဲ လို့ တွေးနေမိပါတော့တယ်။
Great Post, Rita! It served the purpose well, in my opinion.
၀ဋ်တို့ ကံကံ၏ အကျိုး ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စဉ်းစားလို့ မရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ရှိတယ်။ ကိုယ်စဉ်းစားလို့ မရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို တခြားသူတွေပါ ရောပြီး ခေါင်းစားခိုင်းလိုက်ဦးမယ်။
အတိတ်ဘ၀ တုန်းက Mr.Y က Mr.X ကို သတ်ခဲ့ဖူးမယ်။ အဲဒီအတွက် Mr.Y မှာ အတိတ်ဘ၀က ၀ဋ်ရှိလို့ အခု ဘ၀မှာ Mr.Z သတ်တာ ခံရတယ်လို့ ပြောလို့ရမယ်။
Mr. X အနေနဲ့လည်း အတိတ်ဘ၀က Mr. W ကို သတ်ခဲ့ဖူးလို့ Mr.Y က သူ့ကို သတ်တာ ခံရတယ်လို့ ပြောရမယ်။ Mr.W အနေနဲ့လည်း အတိတ်ဘ၀က Mr.V ကို သတ်ခဲ့ဖူးလို့ Mr.X က သူ့ကို သတ်တာ ခံရတယ်လို့ ပြောရမယ်။ အဲဒီလိုမျိုး အစဉ်အဆက် အရှေ့ကို လိုက်သွားမယ် ဆိုရင် သံသရာ အစမှာ ပထမဦးဆုံး အသတ်ခံရတဲ့ Mr.A ဆိုတာ ရှိမှာပဲ။ သံသရာ အစဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့မှာ ၀ဋ်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့မှာ ၀ဋ်မရှိဘဲ သူဘာလို့ အသတ်ခံရသလဲ။
ကတ်သီးကတ်သတ် မေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခေါင်းထဲမှာ ဒီကိစ္စကို စဉ်းစားနေတာ ကြာပြီမို့ တစ်ယောက်ယောက်ဆီမှာ အဖြေရှိသလား သိချင်လို့ပါ။ မမေးသင့်ဘူး တော့ မဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တိုင်က သူဟောသမျှ ဆန်းစစ်ပြီးမှယုံလို့ ကာလာမသုတ်မှာ ဟောသွားလို့ တွေးမိတာလေး ပြောပြတာပါ။
ကိုယ့်အထင်ပြောရရင် Mr. A အသတ်ခံရတာက သူမကောင်းတာတွေ လုပ်တာများလို့ အကုသိုလ်ဖိစီးပြီး သူများသတ်တာခံရတာနေမှာ
ပေါ့။ ပြီးတော့မှ ဒေါသအလျှောက်သတ်မိတဲ့
Mr. B က ၀ဋ်ပြန်လည်တာနေမှာပေါ့..
တခုပြီးတခု ဆက်ကာဆက်ကာ လဲကျသွားဖို့ ပထမဆုံးကဒ်ကို ထိတို့လိုက်တာက လက်ချောင်းလေးဖြစ်ဖြစ် ဘော်လုံးလေးဖြစ်ဖြစ် အခြားအရာ တခုခုကစလိုက်တာပေါ့။ အဲ့ဂလိုဖြစ်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ စေတနာဆိုတာ တကယ်အကျိုးပေးတာနော်..
သူများစိတ်ဆင်းရဲအောင် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သူဆိုရင် အခုလဲ အချိန်ကုန် လူပန်း၊ နောင်လဲ ဒီစေတနာရဲ့ အကျိုးပေးကြောင့် ကိုယ်ပြန်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲ စရာအကြောင်းပေါ်ကို ပေါ်လာမှာပါ. .အဲ့ဒါတော့ ယုံတယ်။
ဥပမာ။ ဒေဝဒတ်က ဘုရားကို ခြေမသွေးထွက်အောင်ပြုခဲ့တယ်။ တကယ်တမ်း သူ့ရည်ရွယ်ချက်က အသတ်ကို လုပ်ကြံတာလေ။ ဘုရားရှင်တို့မည်သည် သူတပါးက လုပ်ကြံလို့ အသတ်သေရိုးထုံးစံ မရှိလို့သာ မဟုတ်လား။ အဲဒီအဖြစ်မှာ ဖြစ်စဉ်သာ တူကြေးဆို ဒေဝဒတ်သည် သူများက သူ့ကို ပြန်လုပ်ကြံခံရရုံနဲ့တင် ပြီးတော့မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့အကုသိုလ်က ကြီးလွန်းလို့ ငရဲတန်းရောက်တယ် ဆိုတယ်လေ။
အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ ဆိုတော့ ဒီသံသရာ စက်ဝန်းဟာ အဆုံးအစ မရှိလို့ပါတဲ့။ စက်လုံးတစ်လုံးကို အဆုံးအစ သတ်မှတ်လို့ မရသလို သံသရာကိုလည်း အဆုံးအစ သတ်မှတ်လို့ မရပါတဲ့။